Sanad Gudihiis.. 43 Kun Oo Ruux Oo lagu dilay Gudaha Maraykanka .( Warbixin) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Sanad Gudihiis.. 43 Kun Oo Ruux Oo lagu dilay Gudaha Maraykanka .( Warbixin)
Last updated May 31, 2021 388 0
Dalka Maraykanka oo dhibaatooyin iyo tacadiyaad ka wada caalamka Islaamka ayaa isagana waxaa gudihiisa ka dhacaya dhacdooyin joogta ah, kuwaas oo ay isku leynayaan shacabka kala taagan ee dalkaas ku nool, jinsiyad iyo diinna aaney mideynin.
Tirakoobyadii ugu dambeeyay ee soo baxay waxay muujinayaan in gudaha dalka Maraykanka ay ku kordheen tirada weerarada rasaasta loo adeegsanayo, kuwaas oo lagu beegsanayo shacabka Ameerikaanka ah, waxaana arimaha la yaabka leh ay tahay in weeraradaas ay fulinayaan dad Ameerikaan ah.
Koox qaabilsan tirakoobka hubka iyo weerarada ka dhaca gudaha dalka Maraykanka ayaa tirakoob ay soo saartay waxay ku sheegaty in sanadkii lasoo dhaafay gudaha dalka Maraykanka lagu dilay 43 kun oo ruux oo Ameerikaan ah.
Tirakoobkan la yaabka leh ee muujinaya tirada aadka u badan ee lagu dilay gudaha dalka Maraykanka, waxay warbixintu tilmaameysaa iney ku dhinteen rasaas aan loo meel dayin oo dadkan lala beeegsaday xilli ay ku sugnaayeen goobahooda ganacsiga, goobaha waxbarashada, xaafadaha iyo xitaa wadooyinka waaweyn.
Waxaa sidoo kale 43-da kun ee Ameerikaanka ah ee sanadkii lasoo dhaafay lagu dilay gudaha dalka Maraykanka, tirakoobkana lagu sheegay ku jira kuwa inta dareemay ciriiri aduunyo istoogtay, arinkaas oo ah mid aad ugu badan gudaha dalka Maraykanka, maadaama dadka badi ay yihiin dad gaalo ah oo aan rumeysneyn Allaah Subxanahu wa tacaalaa.
Warbixinta kasoo baxday kooxda tirakoobka hubka iyo weerarada ka dhaca gudaha Maraykanka waxay muujineysaa korar siyaado leh oo ku yimid tirada weerarada ka dhacay gudaha dalka Maraykanka, taasoo dhanka kale kordhisay khasaaraha gaaray shacabak Ameerikaanka ah ee dowladiisa ku taageersan dhibaatada ay ka wado caalamka Islaamka.
43-da kun ee la xaqiijiyay in lagu dilay weerarada sanadkii 2020-ka ka dhacay gudaha dalka Maraykanka, kuma jiraan khasaarhaa xa dhaafka ah ee ka dhashey weerarada 5-ta bilood ee sanadkan 2021-da ka dhacay gudaha dalka Maraykanka, kuwaasoo maalin dhaaf u dhaca, marka cel celi lagu sameeyo.
Xilliga ay warbixintan soo baxday, waxay kusoo aaday iyadoo weerar culus oo ay fuliyeen 3 ruux oo Ameerikaan ah uu ka dhacay gobolka Florida ee Maraykanka, halkaas oo lagu dilay 2 ruux oo Ameerikaan ah, laguna dhaawacay 20 kale.
Goobta uu weerarka ka dhacay waxaa xilligaas ka socday diyaar garowga xaflad, waxaana inta aaney billaaban ka hor billowday rasaasta, ragga weerarka geystay ayaana rasaas ooda uga qaaday dadkii ku sugnaa hoolka ay xafladdu ka dheceysay.
Masuulka Booliiska deegaanka Mayami oo ah halka uu ka dhacay weerarka ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitterka, wuxuu ku sheegay in ragga weerarka fuliyay ay ahaayeen dad qalato dhiig miirad ah, isagoona sheegay iney ku dadaalayaan iney gacanta kusoo dhigaan raggaas weerarka fuliyay.
Gobolka Florida ee marti geliyay weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka Maraykanka, islamarkaana dhacay maalintii Axadda, ayaa sanadkii 2016-da wuxuu marti geliyay weerar culus oo lagu qaaday kalaab ku yaala magaaladaas, halkaas oo lagu dilay 49 ruux, laguna dhaawacay 68 kale.
Qeyb kamid ah weeraradan ka dhacaya gudaha dalka Maraykanka waxaa fuliya dhalinyaro muslimiin keligii duuliyaal ah, kuwaasoo ka carooday tacadiyaadka joogtada ah ee uu Maraykanku ka wado caalamka Islaamka, waxaana dhalinyaradaas ay fuliyeen weeraradan iyagoo ajiibaya baaqa hogaamiyaasha Mujaahidiinta oo marar badan ku taliyay in reer galbeedka lagu beegsado wadamadooda.
Dad badan oo Muslimiin ah, gaar ahaan ducaadda muslimiinta ayaa tilmaamaya in Maraykanka uu Allaah ka abaal marinayo dhibaatada uu ka geysanayo caalamka Islaamka, maadaama uu amni darro iyo dagaallo joogta ah baday dad badan oo muslimiin ah ayuu Allaah wuxuu shacabka Maraykanka ugu bedeley iney amni darro ku dareemaan gudaha wadankooda, waxaana aysan filan karin xilliga uu dhici karo weerar weliba oo u geysta khasaare adag.